तौल बढ्न नदिन कसरी र के खाने? यस्ता छन् तरिका – Samachar Pati
तौल बढ्न नदिन कसरी र के खाने? यस्ता छन् तरिका
खाना घटाएर वजन घटाउने खोज्छन् धेरैले। तर, यो गलत तरिका हो। किनभने यसो गर्दा शरीरका लागि चाहिने न्युनतम तत्वको समेत अभाव हुने खतरा हुन्छ। वजन घटाउन खाएको (क्यालोरी)भन्दा शक्तिका रुपमा प्रयोग भएको (क्यालोरी) खानको मात्रा धेरै हुनुपर्छ।
फेवा वेगनासको रक्तदानमा ५१ युनिट रगत संकलन
गैरकानुनी र असुक्षित गर्भपतन प्रति सरोकारवालाको चिन्ता